Ibrashi yenja yeenkuni, i-Pet Comb, i-Pet Hair Ukususa isikhuseli-Kudi
I-Suzhou Kudi Trade Co., ltd. Ngomnye wabavelisi abakhulu bezixhobo zokuzilungisa izilwanyana kunye ne-leashes ezinokurhoxiswa e-China kwaye siye sachongwa kule fayile ngaphezulu kweminyaka eli-19. Umzi-mveliso wethu wawuseSuzhou, osisiqingatha nje seyure kwindlela ngololiwe usuka eShanghai Hongqiao Airport. Sineefektri ezimbini zethu ikakhulu ezilungiselela izixhobo zokuzilungisa izilwanyana kunye nemikhosi yokubuyisa inja, iikhola kunye nezinto zokudlala zezilwanyana ezinendawo yemveliso iyonke ngaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-9000…
Intambo yokutsala inja erhuqwayo ngentambo ebambekayo yintsontelo ebanzi ethe tyaba. Olu luyilo lukuvumela ukuba uqengqe intambo umva kakuhle, enokuthintela ukubopha inja ukuba ijije kwaye idibanise. Kananjalo, olu luyilo lunokunyusa indawo ephethe amandla entambo, lwenze intambo yokutsala ithembeke ngakumbi, kwaye imelane namandla amakhulu okutsala, yenza ukuba kube lula ukusebenza kwakho kwaye ikwenze ukomeleze okuphuculweyo. I-2.360 ° i-tangle-free yesiko elinzima elinomthwalo wokurhoxisa inja inakho ...
Ukucoca i-Brush Brush kwi-Dogs 1.Oli bhrashi yokucoca izinja yenziwe ngensimbi engenasici, ngenxa yoko ihlala ixesha elide. I-2.Iintambo ezigobileyo zentsimbi kwibrashi yethu eyilelweyo yenzelwe ukungena nzulu kwingubo yesilwanyana sakho ngaphandle kokukrwela ulusu lwesilwanyana sakho. 3.Ibrashi yokucoca ngokwakho izinja iyakushiya isilwanyana sakho ngebhanti ethambileyo kunye nebengezelayo emva kokusetyenziswa ngelixa usiphulula kwaye uphucula ukujikeleza kwegazi. Ukusetyenziswa rhoqo kwe-4, oku kuzicoca ngokwakho kwebrashi kuya kunciphisa ...
Ityala elinzima lokurhoxa inja 1.Umthwalo onzima oPhathekayo wenja yeLeash yenziwe ngezinto zepremiyamu ye-ABS + TPR, ukuthintela ukuqhekeka kwetyala ngokuwa ngengozi. 2.Lokhu kuthathwa kwe-leash ngetapeyiphu ebonakalayo enokufikelela kwi-5M, ke iya kuba lukhuseleko ngakumbi xa usebenza nenja yakho ebusuku. I-3.Umthwalo oMninzi oSebenzisekayo wenja e-Reash enentshukumo eyomeleleyo yasentwasahlobo yokurhoxisa kakuhle, ukuya kuthi ga kuma-50,000 amaxesha. Ilungele inja enkulu enamandla, aphakathi ngokomgangatho kwaye incinci ...
Yenza Ubomi Bethu Bube Ngcono!
I-Suzhou Kudi Trade Co., Ltd. yenye yezona zinto zivelisa izixhobo zokuzilungisa izilwanyana e-China.
Umzi-mveliso ubekwe kwiWangshan Industry Park, kwiSithili saseWuzhong, eSuzhou, China,
egubungela ngaphezulu kwamawaka amahlanu eemitha zesikwere.